Waraanni Israa'el Lammilee Falisxiin Masjiid al- Aqsaa keessatti Salaataa turan irratti haleellaa raawwate - NuuralHudaa
Waraanni Israa’el Lammilee Falisxiin Masjiid al- Aqsaa keessatti Salaataa turan irratti haleellaa raawwate
On May 21, 2021 6
Waraanni Israa’el Muslimoota salaata Jum’aa arraa Masjidal Aqsaa keessatti salaataa turan irratti haleellaa raawwachuun namoonni hedduun miidhamuu gabaafame.
Waldaan Baatii diimaa Falasxiin, haleellaa har’a raawwatame kanaan namoonni hedduun midhaamuu ibse. Haata’u malee lakkoofsi namoota miidhamanii hagam akka ta’e wanti beekkame hin jiru.
Falasxiinoonni Magaalaa Kabajamtuu Alquds keessa jiraatan lakkoofsaan hedduu tahan, guyyaa har’aa lolli guyyoota kudhaniif hidhatoota Hamaasii fi waraana Isra’eel jidduutti geeggeffamaa ture, olaantummaa hidhaattoota Hamaasiin golabamuu hordoofuun Masjidal Aqsaatti walitti qabamanii gammachuu ibsaatuu turan.
Yeroo Falasxiinoonni Gammachuu Ibsaatuu turan
Akkasumas naannawa Magaalaa Kabajamtuu Alquds keessa deemuun gammachuu kana ibsachuuf yeroo socho’aa turaniitti, boombii gaazaa imaammaanii fi boombii harkaa loltoota Israa’el irraa darbameen namoonni hedduun miidhamuu gabaafame.
Tarkaanfiin dhukaasa dhaabuu kun halkan kaleessaa haleellaa suukanneessaa Loltoonni Isra’eel guyyoota 11f magaalaa Gazzaa keessatti raawwataniin booda kan Jaarsummaa Masriin hojii irra oolfame.
Haleellaa humna qilensa Waraana Israa’eliin May 10 irraa kaasee guyyoota 11’f magaalaa Gazzaa keessatti raawwatame kanaan, daa’imman 65 fi dubbartoota 39 dabalatee Falisxiinoonni 232 ajjeefamuu odeeyfannoon ministeera fayyaa biyyattii irraa argame ni mul’isa.
May 22, 2022 sa;aa 2:25 pm Update tahe